Ihe ohuru nke Darktable 3.0, biara na imeghari ohuru na ihe ndi ozo | Site na Linux
Mgbe otu afọ nke mmepe nọ n'ọrụ, a mara ọkwa mmalite nke ụdị ọhụrụ ahụ nke usoro ihe omume iji hazie ma hazie foto dijitalụ 3.0 gbara ọchịchịrị. Ọchịchịrị eme ihe dị ka ihe ọzọ na-akwụghị ụgwọ na Adobe Lightroom ma nwee ọpụrụiche na ọrụ na-ebibi ebibi na ihe oyiyi dị iche iche.
Ọchịchịrị na-enye a nnukwu nhọrọ nke modul ịrụ nile di iche iche nke foto nhazi arụmọrụ, na-enye gị ohere idowe ebe nchekwa data nke foto ndị nwere isi, nye ngegharị anya site na foto ndị dị na ma, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, rụọ arụmọrụ iji dozie agbagọ ma melite ogo, ma na-ejigide onyonyo izizi na akụkọ ihe mere eme niile na ya. A na-ekesa koodu oru ngo n'okpuru ikikere GPLv3.
1 Kedu ihe ọhụrụ na Darktable 3.0?
2 Etu esi etinye Darktable 3.0 na Linux?
Kedu ihe ọhụrụ na Darktable 3.0?
N'etiti akwụkwọ akụkọ ọhụrụ nke ụdị ọhụrụ a, anyị nwere ike ịchọta ya ozugbo e megharịrị interface ahụ na ntughari na GTK / CSS.
Enwere ike ijikwa ihe CSS nwere ike ịchịkwa ihe niile dị na ya, yana nke a kwadebe usoro isiokwu Kachasị maka ojiji na ala na elu mkpebi Monitors.
Na mgbakwunye na ya Anyị ga-enwe ike ịchọta nsụgharị ọhụrụ nke «film tone curve» na «nhazi ụda ụda» modul. Modul ndị a na-enye ụzọ dị ike iji rụọ ọrụ na onyonyo ma ha nwere ike kpamkpam dochie "isi usoro", "onyinyo na ìhè" na "tonal ngosi" modul.
Ọnọdụ agbakwunyere ịzọpụta agba na modul "Ntọala ntọala".A gbanyere ọnọdụ a na ndabara (na ọnọdụ "Bright") ma nwee ike ịgbanwe ọkwa nke faịlụ ndị batara ọhụrụ ma e jiri ya tụnyere faịlụ JPEG nke igwefoto mepụtara.
Ọzọkwa modulu ọhụrụ «RGB etoju» na «RGB ụda usoro«, Kedu nkwado na-arụ ọrụ na ọwa ọ bụla na oghere RGB, na mgbakwunye na modulu ndị dị ugbu a na-arụ ọrụ na ụlọ nyocha.
Ngwá ọrụ eyedropper na agba na ngwakọta, Ntugharị Ntugharị, Mpaghara Agba na Ọdịdị Mkpa, nke na-akwado nhọpụta nke ọnụọgụ uru maka mpaghara ahọrọ (Ctrl + pịa akara ngosi eyedropper).
El mgbanwe akụkọ ihe mere eme na-egosi na mbụ modul "usoro" modul. Akara ngosi ahụ gosipụtara ọnọdụ nke modulu na akụkọ ntolite.
Nkwado maka inye hotkeys maka slid ọ bụla. Dịka ọmụmaatụ, njikwa njikwa ikpughere. Nke a meghere ohere nke idezi ngwa ngwa site na iji njikwa njikwa pụrụ iche.
Agbakwunyela dialog iji hazie metadata ebuputara, na-enye gị ohere ijikwa mbupụ nke data Exif, mkpado, ndị isi ha, na data geotagging.
Nke mgbanwe ndị ọzọ na anyị nwere ike ịchọta:
Nkwado maka ịhazigharị modulu n'usoro etinyere ha na onyonyo ahụ (Ctrl + Shift + Drag).
Modul ọhụrụ ahụ "Tebụl Nchọgharị Agba Agba 3D" na nkwado Hald-CLUT na nkwado Cube PNG.
Nkwado maka ịgbanwe / megharịa arụmọrụ na ọnọdụ lighttable maka akara, akara agba, nhazi ọkwa, metadata, dezie akụkọ ihe mere eme na ụdị eji eme ihe.
Nkwado maka ihe nkpuchi raster (ụdị nkpuchi pụrụ iche).
Redesigned teepu oyiyi na histogram ụdịdị.
Gbanwee profaịlụ mkpọtụ mmechi modul. Agbakwunyere nkwado maka profaịlụ igwefoto ọhụrụ.
Ihe ọhụrụ "Ntọala Ntọala", nke na-enye gị ohere ịhazigharị isi ojii, ọcha na isi awọ, gbanwee saturation ma gbakọọ ikpughere onyonyo na akpaghị aka.
Nkwado maka nyocha ngwa ngwa nke modulu site na aha.
Gbakwunye ọnọdụ nhọrọ onyonyo (ntụnyere ụzọ).
Ebugharị site na POSIX eri gaa OpenMP.
Emeela ọtụtụ njikarịcha maka SSE na OpenCL.
Agbakwunyere nkwado maka ihe karịrị igwefoto ọhụrụ 30.
Nkwado maka Google Photo API ọhụrụ nwere ike ịmepụta ọba site na ọchịchịrị (anaghị arụ ọrụ n'oge a n'ihi igbochi Google).
Etu esi etinye Darktable 3.0 na Linux?
Ndị ọrụ nke Debian, Ubuntu, Linux Mint ma ọ bụ ihe ọ bụla emepụta n'ime ndị a, ha ga-abanye na ọdụ:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Ihe ohuru nke Darktable 3.0, biara na imeghari ohuru na ihe ndi ozo